प्राइभेट (प्रा.लि.) कम्पनी दर्ता गर्नु हुन्छ ? आनुहोस पुरा दस्तुर सहित जानकारी - Pradesh Dainik
प्राइभेट (प्रा.लि.) कम्पनी दर्ता गर्नु हुन्छ ? आनुहोस पुरा दस्तुर सहित जानकारी
सोमबार, जेठ ०६, २०७६ , प्रदेश दैनिक
काठमाडौं, पछिल्लो समय वढी मात्रामा मानिसहरुले प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरेर व्यापार व्यावसाय गरिरहेका छन् । प्राइभेट कम्पनी अर्थात प्रा.लि स्थापना गर्न आवश्यक कागज प्रकृया तथा दस्तुरका विषयमा धेरैलाई ज्ञान छैन् । आज हामीले यस विषयमा जानकारी दिने जमर्को गरेका छौँ । कुनै पनि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग सामूहिक रूपमा मिलेर कम्पनी खोल्न सक्छन् । कम्पनी प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी गरेर ३ किसिमका हुन्छन्। यी मध्ये कुनै पनि कम्पनी खोल्नका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।कम्पनीको किसिम अनुसार दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू फरक हुन्छन्। यो लेखमा भने हामीले प्राइभेट कम्पनी कसरी दर्ता गर्ने ? कहाँ गर्ने, प्रक्रिया, दस्तुर आदि विषयमा छलफल गरेका छौँ। प्राइभेट कम्पनी बढीमा ५० जनासम्म शेयरधनीहरु मिलेर खोलेको कम्पनी हो। साथै एकल शेयर धनी भएको कम्पनी पनि प्राइभेट कम्पनी अन्तर्गत पर्दछ।
प्राइभेट कम्पनी कहाँ दर्ता गर्ने ?
प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
उद्यमी नेपालको सहयोगमा